Sawiro:- Qaab Noocee ah ayey u dhacdey Xafladii Qarsoodiga aheyd ee Sheekh Umal. - Awdinle Online
Home News Sawiro:- Qaab Noocee ah ayey u dhacdey Xafladii Qarsoodiga aheyd ee...
Sawiro:- Qaab Noocee ah ayey u dhacdey Xafladii Qarsoodiga aheyd ee Sheekh Umal.
November 25, 2019 (AO) – Munaasabad soo dhoweyn ah oo loo sameeyay Sheekh Umal ayaa ka socota Hotelka Royal Palace ee degmada C/casiis, iyadoo Ciidamada Amniga ay xireen wadada hormarta Hotelka, iyadoo si xoog badan loo ilaalinayey amniga Sheekh Umal.
Sheekh Umal ayaa ka hor inta aysan bilaaban Munaasabadda ayaa waxaa lagu keenay gaadiidka aanay xabadaha karin oo ay ilaalinayeen Ciidamada dowladda gaar ahaan Ciidanka Nabadsugida.
Maalintii shalay ayay aheyd markii labaad oo la baajiyay muxaadaro uu Sheekha ku qaban lahaa Garoonka kubadda cagta Eng. Yariisow, kaddib markii ay ka soo horjeesteen Culimada Dariiqada Suufida.
Dad aad u tiro yar ayaa ka soo qeyb galey xafladda, tiro ahaanna lagu qiyaasey ilaa 46 qof, hase ahaatee waxaa ay u muuqatey mid la isugu hanjabaayey iyo digniino loo diraayey dad gaar ah oo aan magacyadoodu la sheegin.
Previous articleSoomaaliya oo kaalmaha hore ka gashay wadama ugu amni xun Caalamka
Next articleWakhtiga Doorashada Galmudug oo la soo Bandhigey(Doc’s)